1991 – Year – Channel Myanmar
Child’s Play3(1991) 1991 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ကားဖြစ်ပါတယ်..ဒီကားမှာတော့ Chucky တစ်ယောက်သူ့ရဲ့မူလပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့Andy ကိုလက်စားချေဖို့အတွက်လိုက်ပြီးရှာတော့မှာပါ...File Size : (895 MB) and (295 MB) Quality : 720p Bluray Running Time : 1hr 30min Format : Mp4 Genre :Horror, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Nyi Nyi Lwin Encode by Moe Myint Lwin
The Silence of the Lambs (1991) The Silence of the Lambs (1991) IMDb - 8.6/10_____Rotten - 96% Won5Oscars. Another 63 wins & 51 nominations The Silence of the Lambs (1991) ဟာ Horror & Thriller အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ၁၉၉၂ ခုနှစ် အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်ဆု၊ အမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆု၊ ဒါရိုက်တာဆု အပါအဝင် စုစုပေါင်း ဆု (၅)ခု ဆွတ်ခူးခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ The Exorcist(1973) နဲ့ Jaw (1975) တို့နောက်ပိုင်း Horror Movie တွေထဲမှာ ရှားရှားပါးပါး အော်စကာဆုရခဲ့တဲ့ တတိယမြောက်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ သောမတ်စ်ဟာရစ်ရဲ့ ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ ဝတ္ထုတွေထဲက လူသားစား မှုခင်းဆိုင်ရာ စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန် စိတ္တဇလူသတ်သမားဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ ...
Return to the Blue Lagoon (1991) ၁၉၉၁မွာထုတ္လုပ္ရိုက္ကူးတဲ့ အေမရိကန္ရိုမန္႕ဇာတ္ကားျဖစ္တဲ့ Return to the Blue Lagoonဆိုတဲ့ဇာတ္ကားဟာ သူ႕အေရွ႕မွာထြက္ထားဖူးတဲ့ဇာတ္ကားနဲ႕ကြဲျပားစြာရိုက္ကူးထားပါတယ္။ ဒီဇာတ္ကားေလးမွာ ရစ္ခ်တ္ဆိုတဲ့ပင္လယ္ျပင္မွာေကာက္ရတဲ့ေကာင္ေလးနဲ႕ လီလီဆိုတဲ့ကေလးမေလးတို႕သေဘာၤပ်က္ရာကေန လီလီေလးရဲ႕အေမနဲ႕အတူ ကြ်န္းတစ္ကြ်န္းေပၚကိုေရာက္သြားပါေတာ့တယ္ အေမျဖစ္တဲ့သူေလးကိုလီလီတစ္ေယာက္ ကြ်န္းေပၚေရာက္ၿပီးေတာ့ ၁၀ႏွစ္အၾကာမွာပဲ ဆံုးရႈံးလိုက္ရပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ရစ္ခ်တ္ေလးနဲ႕လီလီေလးတို႕ႏွစ္ေယာက္ကြ်န္းေပၚမွာ တူတူရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရင္းနဲ႕ပဲေနထုိင္လာတာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝကိုေရာက္ရွိလာပါေတာ့တယ္ ရစ္ခ်တ္ေလးကအီစတာပြဲေတာ္ေန႕မွာ လီလီေလးကိုပုလဲေလးတစ္လံုးလက္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္ လက္ေဆာင္ရတဲ့ပုလဲလံုးေလးကိုလီလီတစ္ေယာက္မွန္႕ေရွ႕မွာရပ္ၿပီးေတာ့ အလွဆင္ဖို႕ျပင္တဲ့အခ်ိန္ကတကယ့္ကိုစိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းပါတယ္ ကြ်န္းသူေလးလီလီရဲ႕အလွကိုျမင္ရတဲ့ရစ္ခ်တ္တစ္ေယာက္စိတ္ေတြလႈပ္ရွားေနခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ မထင္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႕ေနတဲ့ကြ်န္းေလးကိုျမိဳ႕ျပကလူေတြလို႕သူေတြေခၚေဝၚတဲ့သူေတြေရာက္လာပါတယ္ အဲ့အခ်ိန္မွာ လီလီနဲ႕ရစ္ခ်တ္တို႕ၾကားဘယ္လ္ု္ေတြဆက္ျဖစ္လာမယ္ဆိုတာဆက္လက္ၾကည့္ရႈရေအာင္ပါ ဘာသာျပန္ေပးတာေတာ့Aye Chansuျဖစ္ျပီးsithuကencodeေပးထားပါတယ္
Happy Ghost5( 1991 ) က်င္လည္ေနၾကပတ္ဝန္းက်င္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႉ႐ွိၿပီး သဟဇာတ ျဖစ္တဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ လြယ္တယ္ထင္ပါသလား... လူသားေတြၾကားက မာယာေတြအဖံုဖံုနဲ႔ လွည့္စားမႈေတြၾကားမွာ ဘယ္လို႐ွင္သန္ ျဖတ္ေက်ာ္ရမလဲ... တိေတြရဲ႕ ျဖဴစင္တဲ့ ေမတၱာ သစၥာေတြရဲ႕ အတိမ္အနက္ဆုိတာ ဒီဇာတ္ကားေလးကို ၾကည့္လိုက္ရင္ အေျဖေပၚမွာသြားပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကေတာ့. မတ္ဂ်စ္ဆိုတဲ့ ေခြးကေလးဟာ သူ႔သခင္မကို အရမ္းသစၥာ႐ွိတဲ့ေခြးကေလး တေကာင္... သူ႔သခင္မ ရဲ႕ခ်စ္သူကိုလည္း သိပ္သေဘာမက်ေပမယ့္လည္း သခင္မ အလိုက် သည္းခံရတာေပါ့ သိတတ္ပီးလိမ္မာတဲ့ေခြးကေလး မတ္ဂ်စ္ဟာ တေန႔မွာ ေခြးဘဝ ကေန လူဘဝ ၄၉ရက္တိတိ ျဖစ္ခြင့္ရ႐ွိခဲ့ပါတယ္ သူဟာဘယ္လိုသဟဇာတ ျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္မလဲ..သူဟာဘယ္လိုမ်ဳိး ဘဝကို ေ႐ွ႕ဆက္မလဲ.သူ သစၥာ႐ွိလွတဲ့ သခင္မ နဲ႔ ျပန္ေတြ႕တဲ့အခါေရာ ဘယ္လိုေတြျဖစ္မလဲဆိုတာ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ပါဦး ဘာသာၿပန္ကေတာ႔ Lina ပဲ ၿဖစ္ပါတယ္ Translated By Lina Encoded By LK
Happy Ghost5( 1991 )
A Chinese Ghost Story3( 1991 ) Chinese Ghost Story ကားရဲ႕ ေနာက္ဆံုး ၃ ကားေၿမာက္ပါ ..Chinese Ghost Story 1 ကို ဒီမွာေဒါင္းပါChinese Ghost Story2ကို ဒီမွာေဒါင္းပါပထမဆံုးကားၿဖစ္တဲ႔ Chinese Ghost Story 1 မွာပါတဲ႔သစ္ပင္မေကာင္းဆိုး၀ါးကိုအေၿခခံၿပီးဇာတ္လမ္းၿပန္ဆက္ထားပါတယ္..အတြဲ ၁ မွာ ရင္ခ်င္ဟ ရဲ႕လက္ခ်က္ေၾကာင္႔ အစြမ္းေတြနည္းသြားတဲ႔သစ္ပင္မိစၦာမေကာင္းဆုိး၀ါးဟာႏွစ္၁ ရာၿပည္႔တဲ႔အခါမွ ၿပန္လည္ေသာင္းက်န္းလို႔လာပါၿပီ...အဲ႔အရပ္ကိုေရာက္လာတဲ႔ ဘုန္းေတာ္ၾကီး၁ပါးနဲ႔ကိုရင္ေလးတို႔ၾကံဳေတြ႕ရတဲ႔အခါမွာေတာ႔......အေတြ႕အၾကံဳႏုနွယ္လြန္းတဲ႔ ကိုရင္ေလးနဲ႔မာယာၾကြယ္လွတဲ႔ သရဲမေလးေတြၾကားဘာေတြဆက္ၿဖစ္မလဲ..ဘုန္းေတာ္ၾကီးကေရာ မေကာင္းဆိုး၀ါး ရန္စြယ္ကိုဘယ္လိုေတြဖယ္ရွားၾကမလဲဆုိတာ..ဆက္လက္ေစာင္႔ၾကည္႕ပါဦး၁+၂ မွာပါတဲ႔ မင္းသား အေၿပာင္းအလဲၿဖစ္ေပမယ္႔ မင္းသမီးကေတာ႔အတူတူပါပဲ....... Translated By Aung Myat ShweEncoded By LKA Chinese Ghost Story 1+2+3 အကုန္လံုးကို ဒီမွာရွာႏိုင္ပါတယ္
A Chinese Ghost Story3( 1991 )
Riki-Oh: The Story of Ricky (1991) ဒီတစ်ခါ အရမ်းကြမ်းတဲ့ ဟောင်ကောင်အက်ရှင်တစ်ကားလေးပါRicky Ho: The story of Ricky ရစ်ကီဟိုဆိုတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပေါ့ဒီဇာတ်ကားက ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးထားတယ်ဆိုပေမယ့် ဇာတ်ကားထဲမှာအခြေတည်ထားတာ ၂၀၀၁ခုနှစ်ပါဇာတ်လမ်းကတော့ ၂၀၀၁ခုနှစ်မှာ ထောင်တွေက အစိုးရပိုင်မဟုတ်တော့ပဲ ပုဂ္ဂ္ဂလိကတွေကိုလွှဲပေးထားတယ်ဆိုပြီးဇာတ်လမ်းဆင်ထားပါတယ်အဲ့ထောင်ကို ရစ်ကီဟိုတစ်ယောက် လူသတ်မှုနဲ့ရောက်လာပါတယ်။ထောင်တွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းတွေရှိနေသလိုအခုသူရောက်သွားတဲ့ထောင်မှာ လေးပိုင်းပိုင်းပြီး အဖွဲ့လေးဖွဲ့ခွဲထားပါတယ်။အရှေ့ဆောင် အနောက်ဆောင် တောင်ဖက်ဆောင်မြောက်ဖက်ဆောင်စသည်ဖြင့်ပေါ့။အဆောင်တစ်ခုချင်းဆီမှာဒိတ်ဒိတ်ကြဲသိုင်းကျွမ်းတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအုပ်ချုပ်တယ်။ရစ်ကီဟိုဆိုတာကလဲ ခေသူမဟုတ် သေချာလေ့ကျင့်ထားတဲ့သိုင်းသမား စိတ်ကလဲမဟုတ်မခံ။အဲ့မှာ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်မှုတွေနဲ့မဟုတ်မခံနဲ့သွားတွေ့တော့တာပဲ။ပြီးတော့ ထောင်ကလဲ ပုဂ္ဂ္ဂလိကဆိုတဲ့အတိုင်း ထောင်ကိုဗန်းပြပြီးနောက်ကွယ်မှာမဟုတ်တရုတ်လုပ်တာတွေရှိနေပြန်တော့....ဒီဇာတ်ကားက Extreme Violence အမျိုးအစားပါသွေးထွက်သံယိုတွေတစ်ကားလုံးပြည့်နှက်နေပါတယ်လို့တော့ ကြိုသတိပေးပါရစေထမင်းစားပြီးမကြည့်ပါနဲ့ xD(ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Hein Min Tun ပါ)File Size : (800 MB) and (344 MB) Quality : Blu-Ray 720p Running Time : 1hr 31min Format : Mp4 Genre : Action, Comedy, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle ...
The Gods Must Be Crazy III: Crazy Safari (1991) The Gods Must Be Crazy III: Crazy Safari (1991)_____IMDb - 5.5/10 ဒီဇာတ်ကားကတော့ ပုလင်းဟာသလို့ လူသိများတဲ့ ဇာတ်ကားတွေရဲ့ နံပါတ် ၃ ဇာတ်ကားပါ။ ရှေ့ကဇာတ်ကားတွေကို " https://channelmyanmar.org/?s=the+gods+must+be+crazy " မှာဒေါင်းလို့ရပါတယ်။ ပုလင်းမင်းသားအကြောင်းဖတ်ချင်ရင်တော့ အောက်မှာဖတ်ပါ။ #Nixau_Toma ( ကမ္ဘာ့ရုပ်ရှင်လောကထဲ ဂင်းနစ်စံချိန်တင်ခဲ့သောလူရိုင်း(သို့) အောင်မြင်မှုငွေကြေးချမ်းသာမှုတွေကိုမသိခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ အတ္ထုပ္ပတ္တိ ) .…………………………………………………………… ” ပီတာက ဆိတ်၇ကောင်ပေး မယ်ဆိုလို့ကျတော်လိုက်လာတာ ရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့စကားကိုကျတော်အခုမကြားဖူးတာဗျ။ ဒီမှာ နေအခါ၃၀ ဝင်တဲ့အထိနေရမယ်ပြောတယ်။ ပြီးရင်ကျတော် စန်တို့ရှိတဲ့ဆီကို ဆိတ် ၇ကောင်ယူပြီးပြန်မယ်။ ”N!xau Toma တောင်အာဖရိကတိုက်အစွန် နမီးဘီးယားဆိုတဲ့နိုင်ငံသေးသေးလေးအပြင်မြို့ပြနဲ့မိုင် ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့ အာဖရိကတောတွင်းတနေရာမှာ စန်ဆိုတဲ့အာဖရိကလူရိုင်းရွာလေးတရွာရှိခဲ့တယ်။ ဒီရွာလေးက နမီးဘီးယားနိုင်ငံထဲကကာလာဟာရီ သဲကန္တာရထဲမှာရှိပြီး အာဖရိယလူရိုင်းမျိူးနွယ်တွေထဲမှာ ခေတ်နောက်အကျဆုံးလူမျိူးစုတွေထဲက ၁၂ရာစုလူနေမှုစနစ်လိုနေထိုင်ကြတဲ့ ဘာဆာဝါ ဆိုတဲ့လူရိုင်းမျိူးနွယ်စုရဲ့ရွာလေးပါ။ အမဲလိုက် ပျားအုံဖွတ် ငါးဖမ်းရင်း အသက်မွေးကြပြီး လယ်ယာမြေစိုက်ပျိူးမှုကိုတောင်မသိရှိသလို သူတို့ဘာသာစကားဟာလူ၁သောင်းတောင်မသိတဲ့ဘာသာစကားတခုကို ပြောကြတဲ့လူရိုင်းမျိူးနွယ်ပါ။ ၃နှစ်လောက်နေမှမြို့ပြအမဲလိုက်အဖွဲ့တွေကိုတွေ့ရလေ့ရှိပြီး ဒါကိုကသူတို့အတွက်အထူးအဆန်းဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ...
The Guyver (1991) The Guyver (1991)_____IMDb - 5.0/10 ဒီကားလေးကတော့ ၁၉ ၉ ၁ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ SuperHero ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်.... သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ Guyver လို့ခေါ်တဲ ဂြိုလ်သားပစ္စည်းတစ်ခုကို ဂြိုလ်သားတွေလက်ထဲမရောက်အောင် ယူပြီးထွက်ပြေးနေရာကနေ ဂြိုလ်သားတွေဖမ်းမိတာကိုခံလိုက်ရပြီး အသတ်ခံလိုက်ရပါတယ်.. ဒါပေမယ့် သူဟာ အဲဒီ Guyver ဆိုတဲပစ္စည်းကို ဂြိုလ်သားတွေမမြင်အောင်ဖွက်ထားခဲ့ပါတယ်... အဲဒီ ဂြိုလ်သားပစ္စည်းကို လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကရလိုက်တဲအချိန်မှာတော့ အစွမ်းထက်တဲစွမ်းအင်တွေကိုရလိုက်ပါတော့တယ်... ဂြိုလ်သားတွေဟာ Guyver ကိုပြန်ရဖို့အတွက် ဒီလူငယ်လေးနောက်ကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးကြပါတော့တယ်... ဒီကားလေးဟာ Super Hero ဇာတ်လမ်းကြိုက်သူတွေအတွက် အကြိုက်တွေ့စေမယ့်ကားလေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး... အခုခေတ်မှာ Super Hero ဇာတ်လမ်းတွဲတွေများလာပေမယ့်လည်း ၁၉ ၉ ၁ ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ ဒီကားလေးကတော့ Old But Gold ဆိုတဲ့ ကားလေးတစ်ကားထဲမှာပါတယ်လို့ပဲပြောလိုက်ပါရစေ.. Quality ...... DVDrip Format ...... mp4 Duration ........ 01:28:00 Size ..... 664 MB Translator ..... Ohmmar Khin Encoder ...... Moe Myint Lwin
Hot Shots! (1991) Unicodeမြန်မာပေါကားတွေကြည့်ရတာရိုးနေပြီလား? အမေရိကန်ပေါကားစစ်စစ်ကြည့်ချင်ပါသလား? ဒါဆိုရင်တော့ Hot Shots ကို ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ။Hot Shots ရုပ်ရှင်ဟာ ဟောလီးဝုဒ်က နာမည်ကြီးဇာတ်ကားတော်တော်များများကို သရော်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ကားပါ။အခုတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Hot Shots Part 1 ကတော့ 1986 ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Top Gun ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကို အဓိကထား သရော်ထားတာဖြစ်ပြီး Kevin Costner ရဲ့ Dances with Wolves လို နာမည်ကျော်ကားကြီးတွေကိုလဲ နည်းနည်းစီ သရော်ထားပါတယ်။အခု Part 1 မှာတော့ အဖေ့ရဲ့နာမည်ဆိုးကို အမွေဆက်ဆံထားရတဲ့ တော်ပါဟာလေကို လေတပ်က ပြန်လည်ဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီး လျှို့ဝှက်မစ်ရှင်အကြီးစားတစ်ခုမှာ ပါဝင်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျက်လေယာဉ်ကြီး လေပေါ်မှာ Drift ဆွဲတာ၊ ဘရိတ်အုပ်လိုက်တာတွေအပြင် ရယ်မောစရာအခန်းတွေအများကြီးပါတာကြောင့် မြန်မာရွာကားတွေကြည့်ရတာ ပျင်းရိလာတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် ကြည့်သင့်တဲ့ အမေရိကန်နွားကျောင်းသားကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာလဲ စတားလုံးရဲ့ Rambo ရုပ်ရှင်ကားတွေ အဓိကထားသရော်ထားတဲ့ Hot Shots Part ...
The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991) The Naked Gun 2½: The Smell of Fear (1991)IMDb - 6.9/10_____Rotten - 56% ရဲဋ္ဌာနက ဗိုလ်လေး ဖရန့် ဒရက်ဘင် ပြန်လာပါပြီ။ ရှေ့ကားမှာ ဘုရင်မကြီးကို ကာကွယ် ပေးပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံ ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကယ်တင် ခဲ့တာကု အားလုံးသိပြီး ဖြစ်မှာပါ။ အဲ့ကားမှာ ဂျိန်း ဆိုတဲ့ မိန်းမပျိုလေးကိုတွေ့ပြီး ဖရန့် တစ်ယောက် ချစ်ကြိုက်မိပါတယ်။ ကျုပ်တို့ ရဲ့ လူလွဲ ကြီးက ဒီကိစ္စမှာတော့ မလွဲဘူးဆိုတာ သိလိုက်ကျမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ လမ်းခွဲခဲ့ ရပါတယ်။ကျုပ်တို့ရဲ့ ဖရန့်ကြီးလည်း ကြေကွဲပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း ရဲတစ်ယောက် ဖြစ်တာနဲ့ အညီ တာဝန် ဝတ္တရားတွေကလည်းရှိသေးတာကိုး။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ နိုင်ငံ့အရေးနဲ့ ပတ်သတ် နေပါတယ် သမ္မတ က နိုင်ငံ့ အနာဂတ် စွမ်းအင် အတွက် ဒေါက်တာ မိုင်ဟိုင်မာ ဆိုတဲ့ ...